maxkamadda darajada kowaad ee Gaalkacy oo amartay in la soo qabto gaari lagu tuhmayo meydka Gabadha yar – Walaal24 Newss
Wararka naga soo gaaraya waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya in saaka halkaasi uu ka socdo muddaharaad lagu muujinayo dareenka murugo iyo xanuunka uu reebay dilkii waxashnimada ahaa ee loo geystay Caa’isha Ilyaas.
Dad u badan haween iyo dhalinyaro ayaa muddaharaad ku maraya qeyba kamid ah magaalada waxaana ay dalbanayan in caddaalad loo raadiyo marxuumad Caa’isha Ilyaas oo si banii’aanimada ka baxsan kufsi iyo dil loogu geystay Gaalkacyo.
Sidoo kale guud ahaanba waxaa maanta la fasaxay xarumaha waxbarashada waqooyiga Gaalkacyo waxaana ardaydii dugsiyadu ka qeyb qaadanayan muddaharaadka ka socda magaalada ee caddaalada loogu dalbayo Caa’isha oo ka tirsaneyd bahda waxbarashada.
Maxkamadda derejada 1aad ee magaalada Galkacyo ayaa qoraal ka soo baxay lagu amray laamaha ammaanka inay gacanta ku soo dhigaan gaari ku eedaysan in lagu sidey meydka marxuumada Caaisha Ilyaas Aadan.
Gaarigaan ayaa calaamaddiisu tahay MARK TWO GG-682, waxaana maxkamaddu sheegtay inuu ku qoran yahay gaarigaas Yaasir Aadan Cali, waxaana laamaha ammaanka gobolka Mudug iyo degmada Galkacyo lagu wargeliyey inay gacanta ku soo dhigaan si loogu sameeyo baaritaan ku aadan dilka gabadhaasi yar.
Akhriso qoraalka ka soo baxay Maxkamada Darajada Koowaad:-
Gudiga Xuduudaha iyo Doorashada oo kulan isugu yeeray dhamaan musharaxiinta Jubbaland
Qaramada Midoobay oo sheegtay in isbadalada ka socda Soomaalia ay muujinayaan guulo
Ra’iisul Wasaare Khayre oo xarigga ka jaray Xabsiga Guud ee Muqdisho iyo maxkamad casri ah
Saldhig laga qorsheynayo xoreynta Jubada Dhexe oo laga hirgalinayo Baardheere